भारतसंग पाकिस्तान आक्रोशित: उच्च अधिकारी फिर्ता पठाउने, व्यापार स्थगन गर्ने घोषणा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । पाकिस्तानले आफ्नो देशमा रहेका भारतीय उच्च अधिकारीलाई निकाला गर्ने र भारतसँगको दुई देशीय व्यापार स्थगन गर्ने घोषणा गरेको छ । जम्मू कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने भारतको संविधानको धारा ३७० भारत सरकारले सोमबार खारेज गरेपछि पाकिस्तानले बुधबार यो घोषणा गरेको हो ।
‘हामीले हाम्रा राजदूतलाई दिल्लीबाट स्वदेश फिर्ता गर्ने छौँ भने उनीहरूका प्रतिनिधि पनि फिर्ता पठाउने छौँ,’ पाकिस्तानका विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद क्वुरेशीले भने । उनले भारतसँगको पाकिस्तानको कूटनीतिक सम्बन्धको स्तरलाई न्यूनीकरण गरिएको पनि बताए ।
भारतको पछिल्लो निर्णयका विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा पनि पाकिस्तानले आवाज उठाउने उनको भनाइ छ । जम्मू कश्मीरलाई दिइएको विषेश अधिकारलाई केन्द्र सरकारले फिर्ता लिएको विषयलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव झन् बढ्दै गएको छ ।
भारतको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानून तोडेको र भारतमा जातको आधारमा हिंसा हुन सक्ने डर रहेको पाकिस्तान पक्षको तर्क छ । हिमाली क्षेत्र कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूमि भएको दावी गर्दै केही भागमा दुई देशले शासन गर्दै आएका छन् ।
भारतले शासन गरेको कश्मीर क्षेत्रमा लामो समयदेखि पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेकाले तीन दशकमा हजारौँको मृत्यु भएको र गरिबी झनै बढ्दै गएको भारतको दावी छ । गरिबी बढेको, विकास रोकिएको र द्वन्द्व अन्त्य हुन नसकेकाले केन्द्र सरकारले जिम्मेवारी लिनु परेको केन्द्रीय मन्त्रीहरूको भनाइ छ ।
अयोध्यास्थित विवादित भूमिमा राम मन्दिर बनाउने गरी हिन्दूको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतलले अयोध्यास्थित विवादित भूमिमा मन्दिर बनाउने गरी हिन्दूको पक्षमा फैसला […]
दिल्लीमा स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा, ५० लाख मास्क वितरण, नेपालमा कस्तो असर ?
काठमाडाैं । वायु प्रदूषणका कारण विषाक्त हावा फैलिएपछि भारतको राजधानीमा अधिकारीहरू सार्वजनिक स्वास्थ्य […]
किन विषाक्त भयो दिल्लीको हावा ? दिल्ली प्रदूषणको असर तराईका जिल्लामा
काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीको वायू प्रदूषण खतरनाक स्तरमा पुगेको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न […]
वासिङ्टन । विश्वकै लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरले आफ्नो प्लेटफर्मबाट राजनीतिक विज्ञापन स्वीकार नगर्ने […]
अमेरिकी सेनालाई चुनौती दिदै अल–हाशमी आईएसको नयाँ नेता चयन, को हुन उनी ?
एजेन्सी । इस्लामिक स्टेट (आईएस) आफ्नो संगठनको नयाँ नेता चयन गरेको छ । अमेरिकी सेनाको कारवार्हीमा आफ्नो नेता […]
खार्तुम । सुडानमा बुधबारदेखि देशव्यापी युद्धविरामको घोषणा गरिएको छ। सर्वोच्च परिषद्का अध्यक्ष अब्देल फताह अल […]